ေခါင္းေဆာင္တို႔ရဲ႕ အနားယူခ်ိန္ အသံုးခ်နည္း(၈)ခု – Gentleman Magazine
အခ်ိန္ရွိသ၍ အလုပ္ခ်ည္းပဲလုပ္ေနတာ ေကာင္းတယ္ထင္ပါသလား ? တကယ္ေတာ့ အနားယူအပန္းေျဖခ်ိန္၊ စိတ္ပါ၀င္စားရာကို လုပ္ဖို႔အခ်ိန္မရွိတာက သင့္ကို ပ်င္းရိေလးလံလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ထိပ္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိထားၿပီး အလုပ္အရမ္းလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြေတာင္မွ အနားယူခ်ိန္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ ဘယ္လိုအခ်ိန္ျဖဳန္းေလ့ရွိတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။
အျပင္ကိုထြက္ၿပီး သဘာ၀အတိုင္းလတ္ဆတ္တဲ့ ေလကို႐ႈ႐ႈိက္ရတာက ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္ထဲက စိတ္ဓာတ္ေတြကို လန္းဆန္းႏုပ်ိဳေစႏိုင္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ေအာက္မွာ တစ္ေနကုန္ထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနဖို႔က သဘာ၀မက်ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရတာနဲ႔ အျပင္ကိုထြက္ၿပီး ေျခဆန္႔လက္ဆန္႔လုပ္သင့္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ခဏေမ့ထားၿပီး ငါးမွ်ားထြက္ျခင္း၊ ေျခလ်င္ေတာင္တက္ျခင္း၊ ငွက္ၾကည့္ျခင္း၊ ေရလိႈင္းစီးျခင္း၊ ႏွင္းေလ်ာစီးျခင္းတို႔လို ျပင္ပမွာလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြမွမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္မွ ခဏတာလမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္လိုက္တာကလည္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးကို ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ တူညီတဲ့အလုပ္ေတြကိုပဲ လုပ္ေနတာက သင့္ရဲ႕တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ကို သြားေရာက္ပါ၊ အရည္အခ်င္း အတတ္ပညာအသစ္ေတြ သင္ယူပါ၊ ထူးျခားတဲ့ေနရာေဒသေတြကို သြားေရာက္လည္ပတ္ပါ။ ဆန္းသစ္တဲ့အျမင္နဲ႔ စူးစမ္းလုိစိတ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ထားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ေတြကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ကိုယ္တိုင္အတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေတြ မ်ားလာမွာျဖစ္သလို အမ်ားက စိတ္၀င္စားတဲ့လူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္လာမွာပါ။
လုပ္အားေပးပြဲေတြ၊ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုမၸဏီဥကၠဌေတြပါ၀င္ေနၾကတာကို သင္ေတြ႕ဖူးမွာပါ။ သင့္အေနနဲ႔လည္း အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးကို ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကူညီမႈေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္တိုင္လည္း ပီတိျဖစ္ရသလို အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္တတ္သူအျဖစ္နဲ႔လည္း လူသိမ်ားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္၀င္စားစရာအေကာင္းဆံုးလူေတြက သူတို႔ဘ၀မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာသင္ယူေနတတ္ၾကပါတယ္။ စာသင္ခန္းထဲမွာသင္ယူတဲ့ပံုစံကေန အေတြ႕အၾကံဳကေနသင္ယူတာမ်ိဳးအထိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ျမွင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရမယ္ဆိုရင္ အႏုပညာတန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ပါ။ စာေရးတတ္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ဓာတ္ပံုပညာကို ေလ့လာပါ။ ဒီလို ေလ့လာသင္ယူမႈ အသစ္ေတြကို သင့္ရဲ႕လက္ရွိအလုပ္မွာေရာ ေနာက္ပိုင္းမွာပါ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ေပးႏိုင္တာကို ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြက ႐ုံးခန္းထဲမွာပဲ အခ်ိန္ကုန္မေနတတ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အျပင္သြားၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မယ့္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေတြ တည္ေဆာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေလးစားအားကိုးသူေတြနဲ႔ သာမန္ခင္မင္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေလးနက္တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ရရွိတဲ့အထိ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုမိတ္ေဆြမ်ိဳးနဲ႔ ေန႔လည္စာအတူစားပါ၊ လုပ္ငန္းခြင္ကို ဒါမွမဟုတ္ အလွဴပြဲကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ဖိတ္ေခၚပါ။
လူတိုင္းတစ္ေန႔မွာ (၂၄)နာရီပဲ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ခ်စ္တဲ့လူေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ပြဲလမ္းေတြကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလုပ္မ်ားတဲ့သူမျဖစ္ပါေစနဲ႔။ မိသားစုက ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေနပါေစ။
ခေါင်းဆောင်တို့ရဲ့ အနားယူချိန် အသုံးချနည်း(၈)ခု
အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ဘယ်လိုအချိန်ကုန်တတ်ကြသလဲ?
အချိန်ရှိသ၍ အလုပ်ချည်းပဲလုပ်နေတာ ကောင်းတယ်ထင်ပါသလား ? တကယ်တော့ အနားယူအပန်းဖြေချိန်၊ စိတ်ပါဝင်စားရာကို လုပ်ဖို့အချိန်မရှိတာက သင့်ကို ပျင်းရိလေးလံလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိထားပြီး အလုပ်အရမ်းလုပ်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှ အနားယူချိန်တွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောင်မြင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ ဘယ်လိုအချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။
အပြင်ကိုထွက်ပြီး သဘာဝအတိုင်းလတ်ဆတ်တဲ့ လေကိုရှုရှိုက်ရတာက နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲက စိတ်ဓာတ်တွေကို လန်းဆန်းနုပျိုစေနိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးရောင်အောက်မှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေဖို့က သဘာဝမကျပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ရတာနဲ့ အပြင်ကိုထွက်ပြီး ခြေဆန့်လက်ဆန့်လုပ်သင့်ပါတယ်။ အလုပ်တွေကို ခဏမေ့ထားပြီး ငါးမျှားထွက်ခြင်း၊ ခြေလျင်တောင်တက်ခြင်း၊ ငှက်ကြည့်ခြင်း၊ ရေလှိုင်းစီးခြင်း၊ နှင်းလျောစီးခြင်းတို့လို ပြင်ပမှာလုပ်ဆောင်ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့လည်စာစားချိန်မှ ခဏတာလမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်လိုက်တာကလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ဆောင်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ တစ်နေ့လုံး ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေဖို့ ရည်ရွယ်တည်ဆောက် ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနေလို့လည်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးမရှိပါဘူး။ အထိုင်များခြင်းဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလိုပဲ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အားကစားခန်းမကို သွားပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး(၁၀)မိနစ်လောက် အကြော့လျော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရောစိတ်ကိုပါ တိုးတက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို ချိုးဖျက်တတ်ကြတယ်။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ တူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲ လုပ်နေတာက သင့်ရဲ့တိမ်မြုပ်နေတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ကို သွားရောက်ပါ၊ အရည်အချင်း အတတ်ပညာအသစ်တွေ သင်ယူပါ၊ ထူးခြားတဲ့နေရာဒေသတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ပါ။ ဆန်းသစ်တဲ့အမြင်နဲ့ စူးစမ်းလိုစိတ်ကို ပျိုးထောင်ထားပေးနိုင်ဖို့အတွက် အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ များလာမှာဖြစ်သလို အများက စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာမှာပါ။
လုပ်အားပေးပွဲတွေ၊ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ကုမ္ပဏီဥက္ကဌတွေပါဝင်နေကြတာကို သင်တွေ့ဖူးမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့လည်း အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာ အများအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကို ရှာဖွေလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကူညီမှုကြောင့် သင့်ကိုယ်တိုင်လည်း ပီတိဖြစ်ရသလို အများအကျိုးဆောင်ရွက်တတ်သူအဖြစ်နဲ့လည်း လူသိများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလူတွေက သူတို့ဘဝမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူနေတတ်ကြပါတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာသင်ယူတဲ့ပုံစံကနေ အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူတာမျိုးအထိ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ရမယ်ဆိုရင် အနုပညာတန်းတစ်ခုကို တက်ရောက်ပါ။ စာရေးတတ်အောင် ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ပုံပညာကို လေ့လာပါ။ ဒီလို လေ့လာသင်ယူမှု အသစ်တွေကို သင့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာရော နောက်ပိုင်းမှာပါ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးနိုင်တာကို တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
၆။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအတွက် အချိန်ပေးကြတယ်။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက ရုံးခန်းထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်မနေတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အပြင်သွားပြီး လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်မယ့်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေ တည်ဆောက်တတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လေးစားအားကိုးသူတွေနဲ့ သာမန်ခင်မင်မှုမျိုးမဟုတ်ပဲ လေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ရရှိတဲ့အထိ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးနဲ့ နေ့လည်စာအတူစားပါ၊ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဒါမှမဟုတ် အလှူပွဲကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။
၇။ မိသားစုအတွက်လည်း အချိန်ပေးတတ်ကြတယ်။
လူတိုင်းတစ်နေ့မှာ (၂၄)နာရီပဲ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပေမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့လူတွေအတွက် အချိန်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။ မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပွဲလမ်းတွေကို မတက်ရောက်နိုင်လောက်အောင် အလုပ်များတဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့။ မိသားစုက ပထမဦးစားပေးဖြစ်နေပါစေ။
အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကို သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က သမားရိုးကျအလုပ်ကနေ အနားယူချိန်ရအောင် ယူတတ်ကြပြီး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေထဲက ဖောက်ထွက်ကာ ဘဝရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကို ရှာဖွေကို ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွေထဲမှာ ကျင်လည်တတ်ကြပါတယ်။ လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေတတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးကို သင်မြင်ဖူးတွေ့ဖူးပါသလား။ သင်လည်းပဲ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုပဲ ထပြီး အပြင်ထွက်ပါ။ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Previous: ေယာကၤ်ားေလးမ်ားထင္သလို မိန္းကေလးေတြ အေရးမစိုက္သည့္ အရာ(၃)ခု